» Maamulka Kismaayo oo amar culus kusoo rogay Ganacsatada Magaalada “Faah Faahin”
DHAGAYSO: Baalle oo kamid ah Madaxweynayaasha sheegtay J/Land iyo wayxaabihii ay IGAD isku raaceen
DHAGAYSO: Natiijo noocee ah ayaa kasoo baxday Wadahadalkii IGAD iyo Taageerayaasha Barre Hiiraale
Maamulka Kismaayo oo amar culus kusoo rogay Ganacsatada Magaalada “Faah Faahin”
December 12, 2012 - Written by maamule - Edited bymaamule ShareMaamulka magaalada Kismaayo ayaa ammar kusoo rogay in dadka ka ganacsada dharka ee loo yaqaan Warato aysan suuqa soo dhigan karin dharka ilaa iyo inta qorshe uu maamulku soo wado laga hirgalinayo.
Ganacsatada waratada oo dharkooda soo dhiga meelo aan ku haboonayn oo waddada hareereheeda ah ayuu maamulku ka codsaday ilaa goorta looga samaynayo meelo ay ku ganacsadaan inaysan dharka suuqa soo dhigin.
Waa ammarkii labaad oo kasoo baxa magaalada Kismaayo, shalay waxaa warfidiyeennada lagu amray inaysan wax war ah dirin ilaa iyo ammar dambe oo maamulka kasoo baxa.
Inkastoo suuqa magaalada Kismaayo ee loo yaqaan Suuq-Yare uu soo dhex-galay xaafadaha magaalada haddana waxay ganacsatada waratadu dhagta u taagayaan halka lagayn doono.
5 Responses to Maamulka Kismaayo oo amar culus kusoo rogay Ganacsatada Magaalada “Faah Faahin”
tamaam says:	December 12, 2012 at 23:03	KkkkkkkkkkkkMarksay wax lashEekaysta waayen ayaa dadka la daan daandaansan
Reply	shaahid5544 says:	December 12, 2012 at 23:16	murtadiinta uu waji madoobe horboodo waxaan qas iyo lab ahayn uma soo siyaadin magaalada kismaanyo waa maray shacabka layaan maray dhacaan iyo maray gabdhaha kufsadaan.
Reply	Wiil saran soor says:	December 12, 2012 at 23:54	Waretadu markey shababtu jogtay amaan balaaran bey ahasteen hataa dharkoda halkey malinki ku gatan bey habenki kaga hoyan jiren hadana matanba udanbeysey
Reply	shidane says:	December 13, 2012 at 03:26	waa wax fiican balse waa in meel dag dag ah loo qorsheeyaa
Reply	Moh kismayo says:	December 14, 2012 at 07:11	Shahid adiga aya murdaad ah iyo gal xun e dadka sharafta leh afkaga uraya ka si jeedi duliyohoow